Fanomezan-kasina ny teny malagasy : mitohy anio ny « Dinika amorom-patana » | NewsMada
Ho an’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany, tsy nijanona tamin’ny “Volan’ny teny malagasy” (volana jona) ny hetsika fa mitohy hatrany… Mila omen-kasina isan’andro ny teny malagasy. Anio 01 aogositra, manomboka amin’ny 4 ora hariva, hisoron’afo amin’ilay takalo “Dinika amorom-patana” indray ny Dr. Nalisoa Ravalitera, akademisianina sady mpampianatra mpikaroka . Lohahevitra hanafanany ny dinika amin’izany : “Ny fam­piasana ny hainteny eo amin’ny kabary”.
Mbola ao anatin’ny fihibohana ny ankamaroan’ny firenena, noho izany, amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera “zoom” no hanatanterahana ny “Dinika amorom-patana”. Noho izany, mila misoratra anarana mialoha izay handray anjara amin’ny dinidinika satria voafetra iha­ny ny isa noho ny fandrindrana teknika tsy maintsy atao. Azon’ny rehetra arahina kosa anefa ny fizotry ny “Dinika amorom-patana”.
Marihina fa afaka mandray avokoa ny olon-drehetra na aiza na aiza ny firenena misy azy fa kendrena tsara kosa mba hifanaraka amin’ny oran’i Madagasikara ny fa­nombohana. Amin’ny 3 ora, ohatra, raha any Frantsa ilay mpandray anjara no monina.